Wepamusoro 27 wehunyanzvi wordpress online chitoro madingindira 2021
Tinopinda musimba repasi rese neizvi Zvinoshamisa uye zvirinyore kushandisa WordPress online chitoro madingindira ayo anoshanda kune chero eCommerce webhusaiti. simba rekunamatira matekinoroji, kuita kuti online kutenga kuve kwakachengeteka kupfuura nakare kose, uye vatengi vari kupindura ino nharaunda nyowani kugadzikana, nyore uye kuvimbika. kupinda mumabhizimusi epamhepo uye zvigadzirwa zvebhizinesi nemasevhisi, hazvinganzwisisike kuitisa iyo show ikozvino. uye emazuva ano ehunyanzvi anotarisa, akachengeteka uye akavimbika mawebhusaiti, uye anosanganisa el commerce mhinduroAnoshanda emagetsi, usatarisa kumberi. Iyi inotevera dingindira kuunganidzwa kusangana zvese zvako zvepamhepo chitoro webhusaiti zvido.
Jevelin ndeyekucheka-cheka WordPress ecommerce theme. Iko kusimba kwakavakirwa-mukati kugona kweJevelin's WooCommerce ecommerce plugin suite inogonesa varidzi vewebhu kuvaka zvinoyevedza uye zvinoshanda online zvitoro mumaminetsi. Dingindira iri rinopa mikana yakawanda yekugadzirisa maitiro, maficha uye shanduko yechako chigadzirwa katalog dhizaini. > kutyaira traffic kuburikidza nedenga uye kugadzirira kweshanduro uye RTL optimization ita chokwadi kuti unozadzisa iyovateereri vakafarisisa. Edza Jevelin nhasi uye tanga kugadzira iwo kutengesa!
Zvimwe Ruzivo / Dhawunirodha
Kalium inyanzvi uye yakajeka yeWordPress portfolio uye boutique webhusaiti theme mumutsara. Iyi mhinduro inotyisa kwazvo uye nehunyanzvi inogonesa chero munhu kuti akurumidze kuunganidza mawebhusaiti mumaminitsi. Iyi tema inouya yakasunganidzwa neWPBakery's Peji Inovaka plugin, pamwe neRevolution Slider uye LayerSlider, uye izere-kunze kwebhokisi kusangana neyakajairwa WooCommerce e-Commerce plugin suite. Kalium yakazara ne kuwanda kwezvishamiso, kubva kune anoshanda demo mawebhusaiti uye template mapeji kusanganisira akawanda epamhepo chitoro uye eCommerce matemplate. Kushambadzira zvigadzirwa zvako kutenderera pasirese hazvina kumbove nekukurumidza uye nyore. Ichi ndicho chikonzero zvimweUye zvakare, makambani uye vanhu vari kusarudza kutanga yavo Kalium powered e-commerce mabhizinesi. Zviedze wega uye uve tenzi wechitoro chako!
TheGem chinhu chinowirirana neWordPress theme ine hunyanzvi uye bhizinesi zvido. Iyo ndiyo nzira nyowani nyowani yekuendesa musoro wenyaya uye hunhu mune imwe. Edza chero eayo + 70 mademo pamwe nekukurumidza-nhanho yekungenisa uye uchazviona! IyoGem inoteerera inoteerera uye inopa pixel yakakwana mifananidzo. Iyo yakanakira kutsanangura mashopu uye zvigadzirwa zvinoonekwa nemagariro ayo. Nakidzwa yayo WooCommerce uye ayo matatu ekutsvedza sarudzo pamwe chete. Zvinyorwa uye kumashure zvinogona kuve nyore zvakasarudzika nemidhiya. Iyo peji fomati inogona kuve kubva kune rimwe peji kuenda kune akawanda mapeji. TheGem ine mabaraMativi asina muganho uye akati wandei akafanosarudzwa sarudzo kune h vaverengi uye tsoka Widgets nenzvimbo dzayo kutsanangurwa zvichave zviripo. IyoGem ndeye-yese-mune-imwe bhizinesi pfungwa inoenderana neanoshandisa mushandisi zviri nyore. Iko kusahadzika kwakasara kunogona kugadziriswa neboka revatengi vake rekutsigira! Tarisa uone uye uzvikurudzire! Tarisa uone iyo TheGem! >
Kana zvirizvo, chengetedza nguva nesimba neWebhu. Iyi WordPress online chitoro theme iri mhinduro hombe iyo inokumutsa iwe nekumhanya nekukurumidza. Chishandiso hachizomboku bvunza iwe chero coding uye dhizaini yekuziva. Neye inokodzera dhonza uye inodonhedza anovaka peji, chero munhu anogona kusunungura yavo yekugadzira pfungwa uye dhizaini uye kumisikidza yepamusoro notch online chitoro. Kunyangwe Webify iri rakanakira mafashoni mapurojekiti,yakagadzirira kushandisa, uine mashoma tweaks pano neapo, iwe unogona zvakare kushandisa chishandiso kutengesa chimwe chinhu chakasiyana zvachose. zana mapfupi uye mashoma emipendero. Nezve chiitiko chinogara chakadzikama uye chakakwana pakutenga, Webify zvakare inovimbisa kupindura kwakazara uye kuenderana kwebrowser kune yako webhusaiti. >
Merchandiser iri WooCommerce theme . Yakagadzirwa yakakomberedza yakajairwa WooCommerce eCommerce plugin suite. Customizer avan theme sarudzoceas. Edza Merchandiser izvozvi uye uone kuti chaicho chii dhiri!
Uncode kodhi ine simba uye yakapusa kushandisa mitezo yakawanda yeCommerce theme. Intuitive uye yemukati inowedzeredzwa WPBakery dhonza uye udonhedze anovaka peji, yepamusoro premium Revolution Slider uye Layer Slider plugins, uye eCommerce mashandiro akabatanidzwa neWooCommerce. Iyi theme ndeye mukwikwidzi akakodzera wekugadzira hwaro hwepamhepo kune ese marudzi ezvitoro zvepanyama; kubva kumarekodhi ezvitoro kusvika kuzvitoro zvemabhuku nezvitoro zvembatya, Uncode inogona kuzvibata zvese nekuvaita kuti vataridzike zvakanyanya. Edza Uncode nhasi uye ushamiswe nekusvinura kuri kuita webhu chitoro! Zvimwe Ruzivo / Dhawunirodha
Muchengeti wechitoro inyanzvi inoteerera inopindura WordPress theme yakawanda. E-commerce kugona kunovakirwa zvizere muVatengesi kuitira kuti zvive nyore, saka unogona kushambadzira kutengesa zvigadzirwa kana zvigadzirwa zvinogoneka, kuunganidza uye kugashira kubhadhara, kugadzirisa zvigadzirwa zvigadzirwa. Nekuda kwekuita kwayo kwazvino kushanda optimizations, ikozvino iri imwe yeanokurumidza WooCommerce madingindira pamusika.
Halena dingindira resaiti Rakawanda, rinoshanda uye rakashongedzwa e -commerce webhu. Chishandiso chakangwara chekutora mabhizinesi ako epamhepo pamhepo husiku. Dazadza vashanyi vako vane makatogu anotyisa uye chengeta ivo vachiita zvine simba zvinoonekwa uye nekucheka maficha Anotyisa AJAX kusefa nekutsvaga Ivo vanoita kuti zvive nyore kwavari kuti vawane zvigadzirwa zvavanoda.bvumira huwandu hwezvitoro kuti uvhure chitoro pazuva rekumisikidzwa. Zvigadzirise mumaminetsi neakajeka uye epamberi ekuona peji anovaka. Matani esarudzo dzemaitiro anotendera iwe kuti ushandise mawebhusaiti ako eHalena. Tanidza chitoro chako chitarisiko uye batanidza ese maficha ako ekupedzisira mushandisi kubhurawuza ruzivo. Halena anokupa maturusi aunoda kutamba nevakomana vakuru. Tengesa zvinhu zvako pasirese, neHalena!
Ruzivo rwakawanda / Dhawunirodha
Kana muchitsvaga webhusaiti yeCommerce, iyi ndiyo dingindira rechitoro chepamhepo Iyo WordPress Hanger uyo anogona zviitire iwe. Mune bundle, dingindira rine zvakawanda zvasarudzo kuti ubvumidze iwe kuvhura yepamhepo online chitoro nekukurumidza sezvinobvira nebasa shoma k rakadyarwa. Sezvo iweuchawana munguva pfupi, Iyo Hanger zvakare ine toni yezviri-kunze-kwebhokisi zvemukati zvaunogona kushandisa zvakasununguka sezvazviri. Ingo tarisa iwo mademo ehupenyu kuti unzwisise zvirinani. uye shanduka zvinoenderana, Iyo Hanger inoibata zvese zviri nyore. Kunze kwenzvimbo yayo yekutarisa inova, ehe-commerce, Iyo Hanger inosanganisirawo yakashambadza blog. Chikamu chacho chinoshamisa zvekuti haungade kuchisiya chisina chinhu wochishandisa kushambadzira zvemukati. Ruzivo rwakawanda / Dhawunirodha
A Dingindira rechitoro WordPress pamhepo, seHongo , chishandiso chinomutsa kufarira kwako nekukasira Nekuchinjika uye nekuchinjika ty, Hongo inovimbisa kupedzwa kwemazhinji, akawanda mabasa.akasiyana online zvikwekwe. Kunyangwe iwe uchida kutengesa mbatya, zvishongedzo, mabhegi, wachi, zvigadzirwa, zvigadzirwa zveganda, nezvimwe, gadzira online chitoro neHongo izvozvi. Pane zvakawanda zvakagadzirira-kushandisa-zvishandiso zvaunazvo kune ingangoita pakarepo kuvaka. Muchokwadi, kana iwe ukabatirira kune yekunze-kwe-kwe-bhokisi kutaridzika, Hongo inovimbisa webhusaiti inoshanda zvizere nekungobaya mashoma. Zvakare, iwe unogona dhizaini uye kugadzirisa iyo default kutarisa uchishandisa une simba uye mushandisi -shamwari WPBakery peji anovaka. Chero chipi zvacho chinogoneka e-commerce chinhu uye chikamu zvakare chikamu chechibvumirano. Kubva pane chigadzirwa Wishlist uye nekukurumidza kuona kune nifty kusefa sisitimu, mavara swatches, yekudyidzana mireza uye catalog modhi, Hongo inopa chero chinhu uye zvese zvaunogona kufungidzira.
Zvimwe 'infos / Dhawunirodha
CiyaShop ndeye yakashambidzika uye nifty WordPress online chitoro theme inobvumidza iwe kuti ugadzire chero chero mhando yechitoro chepamhepo. Iko kune zvishoma kusvika pakukanganisa neichi chishandiso chishandiso chekuvaka eCommerce mapuratifomu. Muchokwadi, iyo chete muganho waungatarisana nawo kufunga kwako wega. Nekudaro, kana iwe uchida kurudziro, ingo tarisa pamakumi mana akasanganisirwa mademo uye uone izvo zvinogoneka neiyi inomanikidza saiti template. Asi kutanga, shandisa iyo inoshamisa-tinya kumisikidza gadzira uye tanga yako demo mukubwaira kweziso. CiyaShop ine huwandu hunopfuura zana nemakumi matanhatu emadziro akavakirwa-zvikamu uye zvikamu, kurarama zvakagadziriswa uye akati wandei mapulagi pluginshapana mari yekuwedzera. Kutanga kutengesa online neCiyaShop nhasi! >>
Kuzvivakira chemishonga kana chitoro chekurapa pamhepo inongova snap neMmyMedi. Hapana chikonzero chekuita zvinorema kuzvisimudza pachako kana iwe uchigona kurega MyMedi ichengete pachinzvimbo. Uine izvi mupfungwa, iwe unotarisa chete pazvipedzisa, uchichinjisa MyMedi kune yako yekumaka mirau. Zvakare, iwe unogona zvakare kuigadzirisa uye kunyange kugadzira tsika tsika. Nezvinhu zve selli ng unogona zvakare blog uye kukura bhizinesi rako nekushambadzira zvemukati.
Aora dingindira rechitoro muWordPress mutsara wezvose zvine chekuita neimba nemararamiro. Gadzira yakanaka uye inokanganisa eCommerce webhusaiti inozokutorera iwe nguva shoma yekupedzisa. Uine akawanda marongero akafanogadzirwa uye nehunyanzvi hwekudhonza-uye-kudonhedza, haudi chero ruzivo rwekutangisa bhizinesi rako repamhepo muchitaera. , kuve nechokwadi chekuita kunotyisa nguva dzese. Wedzera kungoro, tsvaga mhenyu, kupenya kutengesa, Slider Revolution, uye kubaya-kumwe chete kuisa zvimwe zvezvinhu zvinotonhorera zvakakodzera kutaura nezvazvo. Ning. Zvakadaro, pane zvimwe zvakawanda zvaunowana neAora Kit.
Zvishongo zvichave shamwari yako yepamoyo panguva yekusika, manejimendiuye kugadziriswa kwechitoro chendarama chezvishongo. Iine yayo minimalist uye inoyevedza dhizaini, iwe unozobata nyore kutarisisa kwevanhu vese. Kune akasiyana marondedzero uye emukati mapeji okusarudza kubva, ese ayo anonyatso kugadzirisika. Naizvozvi, iwe unogona kugadzira yako vhezheni yezvishongo uye kutanga online mune dhizaini. Sewe kutanga, iwe unogona zvakare kunakidzwa akati wandei emavhidhiyo tutorials ayo anozokubatsira iwe kuti unzwisise izvo zvekutanga usati waita zvizere. Ramba uchifunga, Bijoux inoshandawo zvishamiso zvezvishongo zvezvishongo. >
Orson ndeye yakavimbika, ine hunyanzvi uye inopindura WordPress online chitoro chewebhu webhusaiti. Icho chishandiso chishandiso chevatariri vewebhu vanotarisa kumisikidza bhizinesi.chika online zvinobudirira. Nesimba rakavakirwa-mukati reWPBakery Peji Rinovaka, webhusaiti dhizaini mabasa ndeye snap. Orson yakakwana kune huwandu hwesarudzo dzekutengesa. Iwe unogona kufukidza yega yega kesi neayo 23 akasiyana epambaji ayo iwe aunogona kuendesa. Nyowani-yakatarisana nezhizha mafashoni zvitoro kana vechidiki tech zvitoro zvitoro. Zvishongedzo uye
zvishongo , zvigadzirwa zvemitambo kana nharembozha, Orson ariko kwauri. Tumira mademo mumasekondi uye uzvigadzirise zvakaringana. Yako yapfuura kukodha chiitiko haina basa kana zvasvika pakuwana makuru maficha. Orson zvitoro zvinotaridzika zvakanaka uye zvinoshanda senge runako. Matani eanotyisa musoro masitaira uye nifty chikwama mapfupi anowanikwa kwauri. Iyo Revolution Slider alTevedzera makaroti akanaka uye uchiita inotsvedza masiraidhi. Iwe unogona kuchengeta vateereri vako vachibatikana sezvavanotarisa yako chigadzirwa katalog. SEO optimization inoita Orson mutambi akasimba mune yekutsvaga injini masosi. Nenzira iyi, iwe unowedzera traffic yako, kutengesa uye mari husiku. Iyo WooCommerce plugin inopa masimba einoshamisa bhizinesi raOsonson, kubva pamasuwo ekubhadhara kuenda kuzvitoro zvekutengesa. Ita kutengesa nhasi, naOrson!
Atelier inoonekwa yakanatswa e-commerce theme kubva kuWordPress. Iyi tema inosanganisira anopfuura gumi nemaviri akasiyana demo mawebhusaiti. Mazana emusoro wemusoro, tsoka, inoshamisa zvigadzirwa zvinogadzirwa zvinotsvedza zvine zvinoshamisa zvinoonekwa zvinoonekwa, zvine simba Parallax sarudzo dzekuona uye AJA yekumberi-kumagumo yekutengera ngoroX iine akasiyana masitayera ehupenyu ... hapana magumo kuAtelier Showcase iro rechokwadi simba rekugadzira online chitoro. Native SEO uye kuzara kwekuteerera kunovhara chibvumirano paAtelier, iyo yakasimba kwazvo yakawanda-pfungwa e-commerce theme pamusika. Tailor
Mr. Tailor ndeye yakashama theme iyo inomira pachena neayo yakazara skrini inotsvedza. Iyo inokodzera vatengesi vebhizimusi vekutengesa uye zvipfeko zvezvipfeko avo vanoda kutengesa zvigadzirwa zvavo online. Kana iwe usiri kuda kugadzira chitoro chepamhepo, unogona achiri kushandisa iyi theme kusimudzira bhizinesi rako kana kuratidza zvigadzirwa zvako uye maficha kune nyika nekuremadza yayo eCommerce chimiro kubva kune theme theme pani.
Mr. . Iyo Tailor WordPress theme inopa inoshamisa theme theme sarudzo iwe.Ivo sarudzo dzisingagumi. Dingindira rakavakirwa-mukati WPBakery peji anovaka zvichaita kuti zvive nyore kwauri kuti iwe ugadzire risingagumi peji dhizaini dhizaini uchishandisa iyo yekudhonza uye kudonhedza interface. Uyezve, VaTailor ndeye WooCommerce yakagadzirira kukubatsira iwe kutengesa zvigadzirwa zvepanyama, zvemadhijitari, kana zvekubatana zviri nyore. Iyi theme inewo zvine simba chitoro manejimendi, yakavakirwa-muhurongwa hwekuteedzera system, mutero uye nzira dzekutumira, zvikamu zvisina muganho uye subcategories, yakavakirwa-mukati coupon system, peji rekubhadhara uye iri nyore kutumira Calculator.
Mr. Tailor inobvumidza vatengi kuyera kana kuyera zvigadzirwa zvako, kukubatsira iwe kuongorora yako sitoro mushumo, uye nesarudzo yekusarudza yemhando. Zvimwe info / Dhawunirodha Demo
Vapas ndiyo yakanaka Iyo yeWebhu webhu chitoro theme kune online vape zvitoro. Nekufarirwa kwemhepo, pane mukana wakanaka wekuti iwe uchazoda kupinda muindasitiri futi. Uchishandisa iyo ine simba uye nyore kushandisa Vapas, iwe unogona ikozvino nekukurumidza kuvaka online kuvepo. Pasina kuda kuve tech-savvy, unogona kutanga kupa vaping zvigadzirwa painternet sepro pro. Nesanganiswa yemagadzirirwo akagadzirwa kare uye anovaka peji reWPBakery, chero munhu anogona kukurumidza kugadzira chigadzirwa chekupedzisira-kirasi. . Uyezve, iwe unowana matani emawadhi, Slider Revolution, Ajax yekutsvaga,
mega menyu , nifty animations, uye mhomho menyu.chitsuwa chakanaka futi. Nezve diki mari, iwe unogona ikozvino kutanga bhizimusi repamhepo uye nekuita mutsauko nekukurumidza neVapas.
Zvezvitoro zve organic nezvikafu, Mildhill ndiyo chaiyo chitoro cheWordPress online theme yekugadzirisa zvizere huvepo hwepamhepo. Iwe unogona kuita kuti zvinhu zviitwe neimwe yeanomwe mapfumbamwe akasiyana, ekugadzira uye ane simba kwazvo mademo. Ramba uchifunga kuti ese marongero aMildhill ari 100% inogadziriswa pasina chikonzero chekubata nekugadzirisa tambo imwe chete yekodhi. Kubatanidzwa kweWPBakery peji rekuvaka kunovhura mikana isingaverengeki zvisinei nekuti hunyanzvi hwako chii. Matani ezve zvinhu, mapeji emukati, marongero eblog, mapfupi, uye masitayera emusoro.musoro zvese zvakatsanangurwa uye zvakagadzirira iwe kuti uwane zvakanyanya kubva kuMildhill. Batanidzwa nekumisikidza imwe-ehl ck demo data importer uye utange munzira chaiyo ine inogara ichivandudza Mildhill. Zvimwe Ruzivo / Dhawunirodha
nyanzvi mue-commerce. Zviri nyore kuti unzwisise uye kugadzirisa neayo eneti-tinya demo kupinza. Uiwane nezvakakosha zvinopihwa uye zvinoenderana neakawanda epamusoro mapulagi plugins. Artemis ine inoteerera dhizaini ine akawanda sarudzo yemamenu uye isina muganho mavara. Inosanganisira inesimba chitoro padivi, blog peji, uye inogadziriswa mamiriro. Iwe unozotowana wakasarudzika chikamu chikamu ogo uye favicons. Artemis inopa WooCommerce kusangana kuti igadzire inotonhorera online zvitoro. AneKune zvakare minicart, zvishuwo zvinyorwa uye peji rekubata rinotsanangurwa. Edza akasiyana masitayera emabara kuratidza zvigadzirwa.
Slider Revolution yekubatanidza
inobvumira mifananidzo kuti uwane yakanakisa yekuratidzira mhando! mafaera uye akazara akarongedzwa neakaratidzwa ekuwedzera ekuwedzera. Iyo inokupa iwe kutarisa bhuku, kuona nekukurumidza kwechigadzirwa uye pfupiso yemenyu tswanda. Vagadziri vakagadzira Artemis kuti ave akanakisa webhizimusi webasa rezvese Sezvakangoita zita rake, iro ramwarikadzi. Iyo 100% uye inochinja kune zvidzitiro, mafomati uye mabhurawuza. Kusiyanisa pane kwayo kwese! Iyo inouya nemahara ekuvandudza uye makuru magwaro! Tarisa Artemis zvakanaka uye uchave nechokwadi chekuti achakunyengetedza nehupenzi hwake. Shandisa Artemis! >
Ja is a multipurpose, yakavimbika uye inochinjika WordPress e-commerce webhusaiti theme. Iyo isina museto seti maturusi ekuvaka emazuva ano uye akasarudzika mawebhusaiti. Sanganisa premium plugins, demo mawebhusaiti, uye peji matemplate kugadzirisa basa rako. Rarama kugadzirisa uye kutaridzika kwemaitiro kurega iwe uchigadzira sepro pasina kunyora mutsara wekodhi. Zvitoro zvepamhepo zvemarudzi ese zvinoda kushanda naJune. Mapeji anotyisa emawadhi uye akasarudzika emapeji echigadzirwa anoratidza zvigadzirwa zvako musitayiti. Inoshamisa iLightbox uye Apple Live Photo zvinoonekwa zvinoita kuti zvemukati zviratidzike. Iyo yakasanganiswa WooCommerce fomati inokutendera iwe kushambadzira zvigadzirwa zvako pasina kutyora ziya. Anoshamisa ezvitoro grid, zvinyorwa uye zvetsika mafirita anounza chitoro chako kune 21st centuryzana remakore. Kupindura uye kuyambuka-inoenderana, June anowedzera vateereri vako husiku humwe. Tora June nhasi uye tarisa bhizinesi rako richikura!
Ita kuti kutengesa kwako kuve nechitoro cheWooCommerce chitoro muguta. Kuunza Shoperific, iro reWordPress online chitoro theme ine zvinoshamisa kwazvo kuita kwakawanda, kugadzirisa chero fomu rebhizinesi kana niche. Tichifunga nezve ecommerce, ino saiti template inokutendera iwe kuratidza zvinoshamisa zvigadzirwa, shanda pamwe nekubhadhara sarudzo, uye wedzera wishlists kune ako vatengi. wedzera ruzivo rwakadzama nezve yako yekutengesa. Kunze kwezvo, unogona kushandisa iyo blog kushambadzira zvemukati uye kuburitsa rakatowanda bhizinesi. Pamusoro pezvo, matemplate ese anonyatso kuchinjika uye anogadziriswa uye zvese zvinhu zviri muzvikamu, sakaui inoita kuti ive yakarongeka uye nyore kushandisa. Zvinhu zvakasiyana zvinosanganisira tsika yemenu, kaunda, yekufambira mberi bhaa, rondedzero yemitengo, kuenzanisa kwechigadzirwa, uye Google Mepu. Uye zvakare, iwe unogona kuve nyanzvi muzvinabhizimusi mune angobaya mashoma nekutenda kune zvakagadzirira-kushandisa zvinhu izvo Shoperific inoisa zvaunogona.
Mamwe info / Dhawunirodha
Demo _ iri rakavimbika rakasiyana siyana WordPress theme yebhizinesi nekutengeserana. Iyo yakasimba uye inochinjika WordPress theme inonyatso sainwa nechinangwa chekushandira online zvitoro zvine hunyanzvi mukushambadzira kwezvigadzirwa zvakagadzirwa nemaoko kana zvigadzirwa zverudzi rupi zvaro. -ins, maficha uye matemplate akabatanidzwa munzvimbo inoonekera. uye ine simba kumashure-kumagumo mushandisi interface iyo inobvumidza munhu wese kuti agadzire yake yega chitoros hunyanzvi hwepamhepo online mumaminetsi. Zvese mune zvese, Handy ndiyo yekupedzisira online chitoro theme yevanogadzira, maartist uye ese marudzi ebhizinesi ekugadzira ayo anoda kuvaka hwaro hwakasimba hwebhizimusi ravo repamhepo.
Aurum ndeye isingakanganwike uye inotyisa kuratidza WordPress online chitoro theme. Dingindira rakasarudzika rakagadzirwa kuti rive rinoshanda uye rinoshanda webhusaiti mhinduro yezvitoro zvepamhepo zvemarudzi ese. Vagadziri vacho vakairongedza nematanho anobatsira, matemplate, majeti, maturusi, uye mapfupi ekuvaka webhusaiti yazvino yechitoro chepamhepo. Asi simba chairo raAurum rakarara mukushamisa kwayo kunoshamisa dhizaini dhizaini. Dingindira iri rakaomarara asi rine mavara minimalism iyo inowoneka mumapeji mazhinji eAurum nemawebhusaiti.
Aurum saka yakanakira ezvitoro zvepamhepo zvinotarisa zvakanyanya zvitaera-zvinoziva zvemusika zvikamu, zvinosanganisira zvitoro zvefashoni , zvitoro zvezvishongo, zvitoro zvemabhuku,
tech zvitoro nezvimwe. zvitoro zvepamhepo zvinoda simba e-commerce mashandiro. Dingindira iri rakanakira mawebhusaiti nekuda kwekureruka kwaunogona kuimaka nechero zita rezita raunoda. Uye zvakare, iyo yakanakisa kwazvo mune yakachena uye inotonhorera kuchinjika. Uye zvakare, Aurum inoshandisa maturusi akaomesesa senge akajeka emusoro, akagamuchirwa mapeji akanaka, akajairwa WPBakery Peji anovaka mapfupi, uye maficha ekuwedzera mashandiro. Muchidimbu, Aurum humbowo hwekuti dzimwe nguva zvinhu zvinopenya zvinogona kunyatso kuve zvegoridhe. >
Nantes ndeyeInonyatso taura uye inoratidzika yakajeka WordPress inopindura yakawanda-chinangwa ecommerce ini. Unogona kushandisa kuwanda kwemafungidziro ekufunga mukati, sezvo Nantes ichigadzirisa zvinhu zvitatu. Kutanga, ine kugona kushambadzira zvirinyore zvigadzirwa nemasevhisi, kuzvinyora uye kuzvipa kune veruzhinji. Tevere, kugona kugonesa varidzi vewebhu kuti vagadzire zvinoshamisa zvakavimbika AJAX masikirwo emabhonzo ekushomeka kwewebhusaiti.
Nantes inorova bhora kunze kwepaki pane ese matatu mapoinzi. Iyo inosangana uye inodarika zvinotarisirwa zvemakambani, e-commerce uye akajairika epamhepo zvitoro zvewebhusaiti ine yayo ine simba system yeepamberi ratings. Iyi theme inewo yakasarudzika yekudhonza uye yekudonha peji anovaka uye yakanyatsobatanidzwa rutsigiro rweWooCommerce. Chekupedzisira, Nantes ine yakanakisa nharembozha menyu, inotsvedza uye inobata, tswanda, AJAX tswanda, kutsvagae yezvigadzirwa uye mafirita. Mukupedzisa, Nantes idingindira rinoitwa zvakanyanya, rinoita kuti zvimwe zvionekwe zvakashata.
Maodzanyemba kuchinhu chakanaka kutengeserana dingindira reWordPress kuwanda zvemagetsi. Dingindira iri zvakare rinotaridzika zvehunyanzvi, rakakwenenzverwa, rakapinza uye nekukurumidza kurodha. Kuchamhembe kuchave kwakanakira kune yakasarudzika niche kunyorera senge yakakwira fashoni online zvitoro, workshop online zvitoro. Izvo zvakare zvakakwana kune dhizaini studio online zvitoro, hunyanzvi hwekugadzira online zvitoro, Artist kana art gallery online zvitoro uye mamwe mabhizinesi akafanana. Iwe unogona zvakare kuburitsa inoputika, yakanyanya kukanganisa uye anoshamisa mapeji ewebhu mumaminetsi pasina ruzivo rwekunyora runodikanwa.. Vashandisi vekupedzisira vanogona zvakare kuishandisa. Iwe unogona kunakidzwa neyakagadzirwa zvakanaka kubhurawuza chiitiko uchishandisa ayo eheerarchical mamenyu, akanyanya kugadziriswa mativi emabhara, uye akanaka chigadzirwa carousels. Dingindira iri rinewo shaya-inodonhedza chigadzirwa portfolios, static Parallax mapeji, yemuno WooCommerce kusangana, uye yakakura yekutsvaga injini optimization. Pakazara, Maodzanyemba dingindira rinoziva kwairi kuenda.
Oxygen ndiyo yakanaka isingaremi WooCommerce WordPress theme. Vagadziri vakavaka iyi theme inobatsira nechinangwa chekuvaka yakakwana, yakazara, uye yakanyatsogadzirirwa WooCommerce ecommerce mhinduro. Dingindira iri rakaringanawo kune zvidiki zvidiki uye zviri pakati nepakati zvitoro zvinoda kuchengetedza mufananidzo wavo nevatengi vavo. Iyo yakawanda mOxygen's peji marongero uye peji matemplate, ayo iwe aunokwanisa kuisa nyore, ese anotarisa pane yakapusa mushandisi yekufambisa ruzivo. Zvakare, iyi theme inotsvaga kukutungamira iwe pawebhusaiti yako uku ichikuita kuti unzwe uri pamba panguva imwechete. Inoita kuti vatengi vako vagadzikane zvakakwana kushandisa mari yavo pane chako chigadzirwa uye uve wekutanga-nguva vatengi. Nekuda kweizvozvo, vanogona kudzoka vatenge kubva kune yako webhusaiti. Pamusoro pezvo, maokisesi eOxygen anokwezva epadivi, zvitaera zvemusoro, uye dhizaini dzinoshanda zvine chokwadi chekuwedzera kugutsikana kwevatengi vako izvo zvinoshandura mukutengesa. Chekupedzisira, Oxygen inoshandisa epamberi AJAX maturusi uye HTML5 maficha kufema mweya mutsva mune chero online chitoro. Zviedze nhasi! Zvimwe Ruzivo / Dhawunirodha
Tinotenda nekushanyira Colourlib uye kuverenga chinyorwa ichi! Tinozvikoshesa zvikuru! KugadzirisaEnant, ungangoda kudzidza ku
uchishandisa yedu yemahara WordPress madingindira. tiite kuti tigamuchire komisheni kana ukasarudza kutenga chigadzirwa chataurwa. Mifungo iri papeji rino ndeyedu uye isu hatigamuchire imwezve bhonasi yeongororo dzakanaka.
23 girini uye eco-inoshamwaridzika izwi rezvinyorwa 2021
2021-07-21 18:40:11 | Webhusaiti
Urwu ndirwo runyorwa rwakazara kwazvo rwehunyanzvi hwakanyanya hunyoro uye eco-hushamwari WordPress madingindira anowanikwa mumusika, ingave inyanzvi kambani eco-hushamwari kambani kana mugari anozvininipisa wepasi, WordPress mapuratifomu anogona kukupa iwe pasi. Inoita sei? Chekutanga, inobvisa chi...
16 akanakisa mazambiringa uye retro wordpress madingindira ehipsters 2021
2021-07-21 18:26:34 | Webhusaiti
Kutsvaga yakanakisa vintage uye retro WordPress theme kumira kunze kwenyika yanhasi? Pano iwe unowana akanakisa ehupster madingindira ebhizinesi diki, yekudyira, yekugera shopu, blogging, webhusaiti yako uye vamwe Vanhu vanoda manzwiro ekushuva nguva dzese dzavanofamba kuburikidza zvakapfuura. Uye i...
Pamusoro makumi maviri neshanu akanakisa emashoko matsva emazwi 2021
2021-07-21 18:19:02 | Webhusaiti
Muunganidzwa wakanyatso chengetedzwa weakanyanya kunaka madhaimendi eWordPress ayo ane akawanda mademo, akawanda maficha, uye anovaka peji anovaka. Zvekutengeserana, nehunhu hwayo, inobatsira. Mutengesi akanaka haambokundikana kutora mukana, uye internet mugodhi wegoridhe wakasiyiwa usina kuchengetw...
27 akanakisa emazwi emuchato madingindira 2021
2021-07-21 18:00:55 | Webhusaiti
Rondedzero yakazara yeakanakisa emuchato weWordPress madingindira muna 2021 uye kupfuura. Aya madingindira ane zvese zvekugadzira isingakanganwike webhusaiti webhusaiti kuratidza kune shamwari dzako uye mhuri. Muchato wako ndechimwe chezvakakosha zviitiko muhupenyu hwako. Zvese zvinhu zvinofanirwa k...
43 akakurumbira akasiyana-siyana emazwi madhizaini 2021
2021-07-21 17:28:40 | Webhusaiti
Munguva pfupi yapfuura ndakamhanyisa kuyedza: ndinogona here kushandisa multipurpose WordPress madingindira eakawanda vatengi mawebhusaiti? (Vasina kuzviziva ivo. ) Mhedziso? Iwe unotengesa ini ndinogona! Nezvazvowo imi . . Kune izvo, ini ndakafunda mazana ematimu uye ndakazopedzisira ndasarudza run...
23 yakanakisa yekambani yemari wordpress madingindira e2021
2021-07-21 17:11:58 | Webhusaiti
Nhasi tichave tichitarisa kune WordPress madingindira ezvemari emakambani ekudyara, emari masangano uye kunyange epamhepo kubhengi uye kukweretesa masevhisi Mumwe anogona kuona kuti nei kumanikidza kuri kukuru, nekuti kudiwa kwesaiti Inokwezva webhu inodarika zvimwe zvese zvekushambadzira zvinodiwa....
16 zvishongo zvemazwi zvinyorwa zveecommerce nzvimbo 2021
2021-07-21 16:54:45 | Webhusaiti
Kutarisa kuvaka eCommerce webhusaiti kuratidza uye kutengesa zvishongo? Izvi zvishongo zveWordPress madingindira ndizvo chaizvo zvaunoda kuratidza rako rezvishongo bhizinesi uye kutengesa zvigadzirwa zvako online, vatengi vazhinji vacharamba kuita bhizinesi neyakaipirwa webhusaiti. Kuti usimbise kuv...
30 akanakisa ekutarisa mazwi emadhivhuru e2021
2021-07-21 16:43:06 | Webhusaiti
Runyorwa rukuru rwezvazvino uye zvehunyanzvi kubvunza WordPress madhizaini kusimudzira bhizinesi rako nhasi Pane kuti uite mashiripiti iwe pachako kana kushandisa mari yepamusoro kubhadharisa nyanzvi, unogona kukurumidza kuita izvi netii yakachena. Izvo hazvikutorere iwe kutora nguva refu, asi yekup...
Wepamusoro 17 Affiliate Kushambadzira Wordpress Themes 2021
2021-07-21 16:33:32 | Webhusaiti
Unoda kukurumidza kuvaka yakabatana yekushambadzira webhusaiti? Aya madingindira eWordPress kune vanobatana nevashambadzi ndizvo chaizvo zvaunoda. Kuva newebhusaiti inozviratidza pachena sekubatanidzwa kune inozivikanwa, yakasimbiswa uye yakavimbika chikuva senge WordPress inosimudzira muvashandisi ...
18 nyanzvi fenicha wordpress madingindira 2021
2021-07-21 16:23:17 | Webhusaiti
Iyi kuunganidzwa kweprimiyamu fenicha WordPress madingindira achakubatsira iwe kusangana nezvinodiwa zvevatengi vako vese uye kupona nekumhanya nhanho yehupenyu, seyakafanogadzirirwa madingindira anogona kunge ari chaiwo nguva saver, kunyanya kana iwe usingade. Kwete kurasikirwa kana imwe chete. kur...
50 akanakisa woocommerce madingindira ekuvaka estore 2021
2021-07-21 16:19:25 | Webhusaiti
Ngatitarisei pane akanakisa WooCommerce WordPress madingindira eese ecommerce chikamu. Isu takasarudza madingindira ane AJAX zvigadzirwa zvekutarisa, dhizaini yakawanda, yakawanda demo misiyano uye rutsigiro rukuru Webhusaiti ine simba uye inodhura inosimudzira chishandiso chatinogona kushandisa kuv...
14 akanakisa modhi agency wordpress madingindira 2021
2021-07-21 16:12:06 | Webhusaiti
Pano iwe unowana ese akanakisa emhando agency agency WordPress madingindira iwe aunogona kushandisa kune yako webhusaiti kana projekiti. Mafashoni uye modhi zvese ndezvekunaka uye runako. Mumiririri wezvinhu zvichangoburwa zvepodfolio zvinoratidza mamodheru uye dhizaini mafashoni mune avo vanoona. N...
Wepamusoro makumi maviri neshanu ezvinyorwa zvemazwi zvemahara ma2021
2021-07-21 16:08:27 | Webhusaiti
Iyo yakanakisa uye yakapusa kushandisa WordPress madingindira eva freelancers ayo anozokubatsira iwe kuwedzera kugona kwako. Kuzivikanwa kweinternet kwavhura mikova kune vanhu vaida kushanda nekuwana raramo sema freelancers. Munguva ino, vanhu vazhinji vanozvimiririra nekuda kwekureruka uye kuwanika...
Akanakisa emazwi madhizaini ezvivakwa nemapurani ekuvaka 2021
2021-07-21 15:54:43 | Webhusaiti
Iyo yakazara kuunganidzwa kweakanakisa ekuvakisa WordPress madingindira emakambani, portfolio uye epamoyo dhizaini mawebhusaiti uye mablog. Zvekuvaka zvagara iri niche sevhisi nekuda kweayo maratidziro uye yakakwira mutengo. Mune ino bhizinesi unogona chete tora mashoma anotungamira, asi mikana iwe ...
20 inotyisa yemahara 2021 bootstrap navbars mienzaniso
2021-07-21 15:38:33 | Webhusaiti
Gadzira yakanakisa, inyore, uye inokodzera saiti yekushambadzira nemahara edu eBootstrap yekufambisa bar matemplate Iwe unoziva kuti yekufambisa bar kana menyu yakakosha - UYE INOFANIRA - chikamu chewebsite yako. Asi haufanire kuzviita kubva muvare. Sevha NGUVA uye MARI! Kuwana ruzivo rwakakosha uye...